Xisbiga xagjirka ah ee SD iyo siyaasaddiisa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xisbiga xagjirka ah ee SD iyo siyaasaddiisa
La daabacay torsdag 25 mars 2010 kl 13.28
Su'aala badan oo muuqaal hal dhinaca leh iyo barnaamij siyaasadeed oo qota dheer ayaa Xisbiga xagjirka ah ee Sverige-demokrati-gu, bilaabey dadaal adagna ugu jiraa sidii uu ugu danbeeynta u gaari lahaa hadafkiisa ku wajahan baarlamaanka.
Laakiin dabagal ay Idaacadda Caalamiga ah ee Iswiidhan ku sameeysey toddobada ugu saameeynta badan waxa loo yaqaano "bloggar" oo ah buug furan ee xusuusqorka aaladda internet-ka,ayaa muujinaya masawir ah in xisbigaasi yahay mid ka soo horjeeda soogalootiga iyo khatarta ka imaaneeysa islaamka iyo muslimiinta oo ah su'aasha booska ugu muhiimsan uga jirta.
Siyaasadda soogalootiga ayaa ka mid ah saddexda siyaasadood ee xisbiga xagjirka ah ee Sverigedemukrati-gu mudnaanta koowaad siinayo doorashada ka hor.
labada kale ayaa ah siyaasadda waayeelka iyo siyaasadda falal-danbiyeedka.Laakiin 57-qadiyado siyaasadeed ah oo ilaa iyo bishii oktoobar ee sanadkii hore la galiyey blogga oo ah buuga xusuusqorka furan,ayaa laba ka mida oo kaliyihi ka hadlayeen siyaasadda waayeelka,labana waxay ka hadleeysey siyaasadda falal-danbiyeedka.
35 maqaaladaas ka mid ah ayaa ku saabsanaa siyaasadda soogalootiga iyo waxyaalo aan fiicneeyn oo la xiriirsan.
Xisbigaan ayaa waxaa maalinta sabtida ah magaaladda Stockholm uga furmi doona kulan sanadeedkiisii.